Burmese taste - Iora: ငါးကြင်းဟင်း၊ ၀က်ပဲငပိ၊ တရုပ်ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကြော်၊ နဲ့ ငပိထောင်းသံပုရာသီးညှစ်
Posted by Iora at 1:34 AM
I ate all of your curries.It's so delicious.After busy week,collect energy to go into kitchen by looking at ur post:D
Sunny March 16, 2011 at 2:20 AM
ဟင်းတွေ စုံနေတာပဲ.. စားချင်တယ်.. ဟင်းချက်ချင်စိတ် ပြန်ပေါ်လာတယ်..
ညီလင်းသစ် March 16, 2011 at 5:15 AM
Wow.... လာပြန်ပြီ၊ မော်နီတာပါ ကိုက်စားပစ်ချင်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခု...၊း)
ငါးဟင်းရည်လေးဆမ်း၊ အထဲက ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ နံနံပင်ယူ၊ ပြီးတော့ ငါးပိထောင်း၊ တရုတ်ဟင်းနုနွယ်..ဒါဆိုရင်ပဲ ကျနော့်အတွက်တော့ အတော်လေး ပြည့်စုံနေပါပြီ၊
Mon Petit Avatar March 16, 2011 at 6:07 AM
Same as Ko NLT, wanna eat everything even the monitor, humm!
Iora March 16, 2011 at 10:03 AM
I am so glad that you ate all. Did you get energy after looking at them? I also practice like that sometimes. But after looking at the food images then I feel so hungry and can't wait to cook myself. So, I just have to eat what I have :( :D
ဒီလိုဆိုတော့.. မော်နီတာပါကုိုက်စားပစ်ချင်တဲ့ ပုို့ စ်တင်တဲ့ထဲမှာ ကုိုယ်လည်းပါသွားပြီပေါ့။ ကုိုညီလင်းသစ်စားမဲ့ပုံစံရေးလိုက်တာ ကျမတောင်ပြန်စားချင်လာတယ်။
You are flattering me!!!
I am honored that you all visit to me. Thanks.
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 16, 2011 at 11:13 AM
အား ငါးဟင်းက စားချင်လိုက်တာ နံနံပင်နှိုင်းချင်းနဲ့
ဒီနေ့ဟင်းတွေ ဟင်းနုနွယ်ဆိုတာကလွဲလို့ အားလုံးကြိုက်တယ်
အဲဒီအရွက်တော့ မစားဖူးလို့ မသိဘူး။
ငပိထောင်းလေးများ ခုရ ခုစားချင်လာပြီ။
ဗိုက်ဆာတယ်.. စာရေးနေရင်း ရောက်လာတာ ဗိုက်ဆာတာ ထမစားဖြစ်ဘူး
ခုတော့ မနေနိုင်တော့ဘူး ထစားရတော့မယ်..
ငွေစန္ဒာ March 16, 2011 at 11:25 AM
ငါးဟင်းကတော့ တကယ့်ရှယ်ပဲ နံနံပင်အကြိုက်နဲ့တော့ တွေ့နေပြီ
လပြည့်ရိပ် March 16, 2011 at 2:10 PM
ဟင်းတွေကို အနီးကပ်ရိုက်ထားတာ ကွန်ပြူတာစကရင်ကိုတောင် သားရေတွေသွားစင်တော့မလို့ ....:-) စားချင်တယ် အကုန်လုံးကို..
Iora March 16, 2011 at 5:06 PM
ဟင်းနုနွယ်ဆိုတာကုိုယ်ပေးလိုက်တဲ့နံမည်ပါ။ ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိပါဘူး။ ကုိုယ်လည်းငပိထောင်းသိပ်ကြိုက်။ ရန်ကုန်မှာတုန်းက အမအကြီးဆုံးက လက်သီးဆုပ်၂လုံးစာလောက်လုံးလုံးပြီးသူလာရင်ယူလာတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လုပ်ပေးထားခဲ့တယ်။ သူတပါတ်နှစ်ပါတ်နေပြီးပြန်လာရင် အဲဒီအလုံးကြီးကကုန်သွားပြီ။ သူကပြောနေကျစကားကုိုပြောတယ်။
ဟဲ့..ညီးတို့ ဟာဟုတ်မှဟုတ်သေးရဲ့ လားဟယ်..တဲ့။ဟုတ်သမှသိပ်ဟုတ်။ သူငယ်ချင်းတွေကလည်းအားပေးတယ်လေ။ ဒါတောင်အစပ်မစားနုိုင်တဲ့ ကုလားလေး ဆိုတာရှိသေးလို့ ။း)))))
ငါးကဟင်းတွေထပ်လို့ သာချက်ရတာပါ။ သူကအားမပေးဘူး။ အားပေးရင်လည်း နဲနဲဘဲ။ ကြော်ရင်တော့စားတယ်သူက။
အကြိုက်တွေတော်တော်တူတယ်နော်။ ဒီအပါတ်တောင် farmers' market သွားထားလို့ နံနံပင်တွေအများကြီးဝယ်ထားသေးတယ်သိလား။
ဟင်း..ဟင်း..အနီးကပ်ရိုက်ထားတော့ ကောင်းသယောင်ယောင် နဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လေ..း)) စားပါ။စားပါ။ အကုန်စားပါ။
subuueain March 18, 2011 at 6:11 AM
ငါးပိထောင်းအရမ်းကောင်းမဲ့ပုံဘဲနော်။ ငါးဟင်းလေးကလည်း စားချင်စရာ။ ကျွန်မတော့ ခွင့်မတောင်းဘဲ လင့်ယူသွားမိပြီ။ :)
Iora March 19, 2011 at 5:23 PM
ငါးပိထောင်းသာပြောတာ။ ငြုတ်ဆုံမရှိလို့ ငြုတ်သီးတုို့ ကြက်သွန်ဖြူတို့ ကိုသပ်သပ်ကြိတ်ပြီးမှ ပုဇွန်ခြောက်ရယ် ငါးပိကင်ရယ် ငြုတ်သီးတွေရယ်ကို စတီးခွက်ခပ်ငယ်ငယ်ထဲမှာ အားလုံးကိုစေးနေအောင် ဇွန်းနဲ ဖိဖိပြီးသမအောင်လုပ်ထားတာပါ။ ဖြစ်သွားတာပါဘဲ။း))